यौन स्वास्थ्य/ रोचक Archives - Page2of 8 -
नुवाकोट - नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका ३७ वर्षीय आफ्नै छोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा बाबुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । १२ वर्षीया छोरीलाई शुक्रबार राति ३७ वर्षीय बाबुले बलात्कार गरेको आरोपमा हाडनाता करणीमा मुद्दा दर्ता गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । मदिराले मातेका आरोपितले यही साउन १७ गते बिहानको २ः०० ब...
आपसमा यौन सम्पर्क गर्दा महिलाले छुट्टै आवाज निकाल्छन् । आवाज त निकाल्छन् तर किन निकाल्छन् त यस्तो आवाज यो सबैका लागि रोचक विषय हुन सक्छ । आखिर अधिकांश महिला किन यस्तो आवाज निकाल्छन् ? के यस्तो आवाज आनन्दको अभिव्यक्ति हो या मनोरञ्जनको चरम अवस्था ? यसबारेमा केही वैज्ञानिकले आवाज निकाल्नु नाटक मात्र हो भनेका छन् भने के...
काठमाडौं - ल्यानसेट कमिसनको उच्च गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रणालीसम्बन्धी विश्वव्यापी प्रतिवेदन बिहिबार काठमाडौंमा सार्वजनिक भएको छ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र पब्लिक पोलिसी पाठशालाले राजधानीमा गरेको एक कार्यक्रमबीच ल्यान्सेटको ‘द ल्यानसेट ग्लोबल हेल्थ कमिसन अन हाइ क्वालिटी हेल्थ सिस्टम इन द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्...